Madaxweyne Xasan iyo wafdi uu hogaaminayo oo dalka dib ugu soo laabtay – Radio Muqdisho
Madaxweyne Xasan iyo wafdi uu hogaaminayo oo dalka dib ugu soo laabtay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, kaddib markii uu dhawaan dalka Masar uga qeyb galay shir looga hadlayay dhaqaalaha iyo maalgashiga.
Madaxweyne Xasan iyo wafdiga la socda waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo saraakiil ciidan.
Madaxweynaha oo ka mid ahaa madax kala duwan oo shirka lagu casuumey ayaa ugu horeyn khudbad uu halkaasi ka jeediyay ku ammaaney Masar dhabbaha ay hayso ee dhinaca qaabeynta mustaqbalka dhaqaalaha dalka oo uu sheegay inay ka faa’iidi doonaan Waddamada Carabta iyo Qaaradda Afrika.
“Waa muhiim in waddamadeena ay horumariyaan siyaasad qeexan oo lagama maarmaan u ah kobcinta maalgashiga shisheeye iyo kan gudaha, waxayna taasi kaalin muuqata ka qaadaneysaa dhaqaalaha oo kordha. Waxaan dhammaanteen halkan isugu nimid inaan isweydaarsano fikrado la xiriira qaabka aan himiladaasi ku gaaro karno iyo inaan ka sii taxaddarno caqabadaha naga hor imaan kara iyo sida looga gudbi karo’’ ayuu yiri Madaxweyna Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa dalka Masar waxaa uu khudbad ka jeediyay shirkaasi ku saabsanaa dhaqaalaha Masar, isagoo sidoo kale kulamo la qaatey Madaxweynaha Masar, Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia, Madaxweynaha Maamulka Falastiiniyiinta, Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta iyo wufuud kale.
Xubnaha wafdiga madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen Wasiirrada Isgaarsiinta, Guuleed Xuseen Qaasim, Batroolka, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibedda Khaalid Cumar Cali iyo Wasiir ku Xigeenka Qorsheynta Cabdullaahi Sheekh Cali, ayaa iyaguna waxay kulamo muhiim ah la qaateen wasiiro iyo madaxda shirkado caalami ah,iyagoo ka wadahadley horumarinta iyo maalgashiga Soomaaliya.
Howlgallo tiro dad ah lagu soo qab qabtay oo laga sameeyay Luuq
Wasiirka Wasaaradda Haweenka oo Mareykanka uga qeyb galaysa shir caalami ah